Amanqaku kaJessica Bruce Martech Zone |
Amanqaku ngu UJessica Bruce
Ndiyiblogger enobungcali, umbhali weendwendwe, Umphembeleli kunye nengcali ye-eCommerce. Okwangoku inxulunyaniswa noShopyGen njengecebo lokuthengisa. Ndikwabeka ingxelo ngeziganeko zamva nje kunye neendlela ezihambelana nomzi mveliso weCommerce.
Kutheni ngqo kwiMveliso zaBathengi ziQala ukwakha iiBrick kunye neeMortar Stores
NgoLwesibini, Novemba 20, 2018 NgoLwesibini, Novemba 20, 2018 UJessica Bruce
Eyona ndlela ilungileyo yeemveliso zokubonelela ngeentengiso ezinomtsalane kubathengi kukusika abalamli. Okuncinci kukuhamba-hamba, kuncinci iindleko zokuthenga zabathengi. Akukho sisombululo sibhetele sokwenza oku ngaphandle kokudibanisa nabathengi nge-intanethi. Ngabasebenzisi be-smartphones abayi-2.53 yezigidi kunye nezigidi zeekhompyuter zabo, kunye ne-12-24 yezigidi zevenkile zeCommerce, abathengi abasaxhomekeki kwiivenkile ezithengisayo. Ngapha koko, idigital